जेठ १३, २०७५ आइतवार ११:४७:१०
अण्डा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । तर एकदिनमा कति अण्डा खानुपर्छ र पकाउने सही तरिका के हो भन्नेबारेमा तपाईंलाई थाहा छ ? या धेरै अण्डाले हानी गर्न सक्छ ? चिकित्सकहरु पोषक तत्वले भरपूर भएकाले खानामा अण्डा सामेल गर्न सल्लाह दिन्छन् । यो भिटामिन ए, बी, डी र बी १२ ...
जेठ १२, २०७५ शनिवार ०९:५२:०६
निपा भाइरस पशुबाट मानिसमा सर्ने नयाँ रोगको रुपमा विकसित हुँदै गरेको एक खतरनाक भाइरस संक्रमण हो । यसले मानिस र पशु दुबैलाई संक्रमण गर्न सक्दछ । यस भाइरस प्राकृतिक रुपमा टेरोपस भन्ने प्रजातिको चमेरोमा रहने गर्दछ । निपा भाइरस पारामिक्जोभाइरिडि परिवारभित्र पर्न...
थालासेमिया भएकाले के खाने, के नखाने ?
जेठ ४, २०७५ शुक्रवार ११:३०:०३
थालासेमिया रोगमा हुने फलाम तत्वको अधिकता रगत ट्रान्स्फ्युजनको कारणले हुन्छ तर बिरामीले खाएको खानाबाट शरीरले अवशोषण गर्ने फलाम तत्व पनि महत्वपूर्ण छ । खानाबाट हाम्रो शरीरमा सानो मात्रामा फलाम तत्व अवशोषित हुन्छ । यदि रगतमा हेमोग्लोबिनको तह कम छ भने अवशोषित हुन्छ ...
पुरुषभन्दा महिलामा ९ गुणा बढी हुने रोग ‘लुपस’ के हो ?
बैशाख २७, २०७५ बिहिवार ११:१९:२४
विश्व लुपस दिवसका अवसरमा रातोपुलस्थित नेशनल बाथरोग सेन्टरले विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। लुपस रोगका बारेमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा बिरामीको जिज्ञासालाई समाधान समेत गरिएको छ। सेन्टरमा कार्यरत डाक्टररुहले दिएको जानकारी अनुसार लुपस रोग महिलालाई पुरुषको तुल...
बैशाख २४, २०७५ सोमवार ११:५५:१७
प्रख्यात स्नायु रोग विशेषज्ञ डा. उपेन्द्र देवकोटा अहिले बाइल डक्ट (पित्तवाहिनी नली) को क्यान्सर लागेर मृत्युसंग संघर्ष गरिरहेका छन् । उपचारका लागि गत मंसिर पहिलो साता बेलायत पुगेका उनी त्यहाँ पनि उपचार हुन नसकेपछि नेपाल फर्किएका हुन् । आखिर बाइल डक्ट क्यान्सर कस्तो हो त ?...
हाँस्नुस्, मज्जाले हाँस्नुस्
बैशाख २३, २०७५ आइतवार १०:२३:३०
हाँसोमा आधारित योगा अभियान ‘वल्र्डवाइड लाफ्टर योगा मूभमेन्ट’ चलाइरहेका मुम्बईका चिकित्सक डा. मदन कटारियाको पहलमा सन् १९९८ देखि विश्व हाँसो दिवस सुरु भएको हो । यो दिवस हरेक वर्षको मे महिनाको पहिलो आइतबार मनाईन्छ । यसपटक मे ६ का दिन परेको छ । हाँसोका म...
कसरी हुन्छ मिर्गौलाको संक्रमण, हुन नदिन के गर्ने ?
बैशाख २२, २०७५ शनिवार ०८:१६:००
मिर्गौलाको संक्रमण निकै पीडादायी रोग हो, जो मूत्राशय (ब्लाडर) को संक्रमण सिस्टाइटिसका कारण हुन्छ । अधिकांश मानिसमा सिस्टाइटिसबाट मिर्गौलाको संक्रमण हुँदैन । तर, कहिलेकाहीँ ब्याक्टेरिया ब्लाडरबाट एक या दुवै मिर्गौलासम्म पुग्न सक्छन् । तत्कालै रोग पहिचान गरेर एन्टिबायोटिकले...
बैशाख १९, २०७५ बुधवार १३:३२:००
एजेन्सी– कोलेस्टेरोल मुटु रोगको एउटा कारण हो। नियमित व्यायाम गरेपनि खानपान स्वस्थ छैन भने शरीरमा खराब कोलेस्टेरोलको मात्रा बढ्छ। यसलाई नियन्त्रित गर्न खानपानमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। केही खानाले कोलेस्टेरोललाई नियन्त्रित राख्न सहयोग गर्छ र त्यस्ता खानाको साइड...
'मेनोपज'बारे नयाँ अनुसन्धान : यी खानेकुराबाट महिनावारी रोकिने समय अघि र पछि सार्न सकिने
बैशाख १८, २०७५ मगलवार १२:५९:४२
बिबिसी- एउटा नयाँ अध्ययनले महिलाहरूले तेलयुक्त माछा खानाले 'मेनोपज' भनिने महिनावारी रोकिने प्राकृतिक समय कैयौँ वर्षले पर सार्न सकिने र कार्वोहाइड्रेट-युक्त खानेकुराले त्यो अवधिलाई अझै अघि ल्याउन सकिने देखाएको छ। युनिभर्सिटी अफ लिड्सले गरेको अनुसन्धा...
बैशाख १७, २०७५ सोमवार १७:२१:२५
मोटोपनाको समस्या समाधानका लागि मानिसहरु विभिन्न तरिकाको खोजी गरिरहेका हुन्छन्। कसैले डाइटिङ गर्छन् भने कसैले खानपानमा परहेज गर्छन्। तर मोटोपनाको समस्या समाधान गर्नुछ भने काचो नरिवलको तेल प्रयोग गर्नुपर्छ। साधारण खालको तेलमा बढी मात्रामा चिल्लोपदार्थ हुन्छ, जो ...
बैशाख १६, २०७५ आइतवार ०८:२८:४४
ओठ मानिसको सुन्दरताको प्रतिरुप हो। विशेषगरी महिलाहरु ओठ सुन्दर बनाउन विभिन्न उपाय अपनाउछन्। लिपिस्टिक, बाम, मोस्चराइजर आदि अनेक प्रकारका साधन लगाउँछन्। सुन्दर बनाउन लगाइएका यस्ता कुराले उल्टै ओठ कालो बनाइरहेका हुन्छन्। यसले महिलाहरुलाई निराश बनाइरहेको हुनस...
बैशाख १५, २०७५ शनिवार २०:१९:२१
दिनभरको थकानपछि रातको समयमा राम्रो निन्द्रा निकै आवश्यक छ। तर धेरै थकानले पनि निद्रा खल्बलिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा राम्रोसंग निद्रा चाहिन्छ। निद्रा कसरी राम्रो बनाउने, थाहा पाउनुस्। तातोपानीले नुहाउँदा रक्तसन्चार सुरुमा केही बढी हुन्छ, तर पछि मन्द हुन्छ। तर चिसो पानीले ...
बैशाख १३, २०७५ बिहिवार ०८:१५:३८
अत्याधुनिक जीवनशैलीको सबैभन्दा ठूलो असर मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने गरेको छ । लामो समयसम्म कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, तनाव र घरपरिबारको जिम्मेवारीलगायतका कारण हामी चाहेर पनि स्वस्थ बन्न सकेका हुँदैंनौं। कामको व्यस्तताले कतिपयले सुत्न समेत नपाएको गुनासो गर्ने गर्छ...
बैशाख ७, २०७५ शुक्रवार १४:२६:३६
थकानको अनुभव सबैलाई हुन्छ । आराम गरेपछि या सुतेपछि थकाई मेटिन्छ । तर जब सुत्दा या आराम गर्दा पनि थकाई मेटिंदैंन भने ‘क्रोनिक फटिग’ को संकेत हुन सक्छ । यो रोगमा बिरामी सधैं आलस्य महसुस गर्छ । आलस्यताले उसको मानसिक, शारीरिक या सामाजिक स्तरमा असर पर्छ । ...
विश्व कलेजो दिवस : यी कारणले हुन्छ कलेजो खराब
बैशाख ६, २०७५ बिहिवार १२:३४:५४
आज १९ अप्रिल विश्व कलेजो दिवस (World Liver Day) । कलेजोलाई स्वस्थ र दुरुस्त राख्न जनचेतना फैलान यो दिवस मनाउने गरिन्छ । कलेजो शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । मुख्य रुपमा यसले खाना पचाउने काम गर्छ । शरीरको कार्यसंग सम्बन्धित ४ सयभन्दा बढी काम कलेजो एक्लैले गर्छ । यसका अलावा ...